पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सुशील ज्ञवाली नियुक्त
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पाँचौ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा सुशील ज्ञवाली नियुक्त भएका छन् ।
१२ वैशाख २०७२ मा भूकम्प गएपछि प्राधिकरणको प्रमुखको रूपमा पुनः नियुक्त भएका ज्ञवालीले बिहीबार सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा पदबहाली गरेका छन् । भूकम्पपछि गठित प्राधिकरणको पहिलो प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा डा. गोविन्दराज पोखरेल नियुक्त भएकोमा त्यसपछि दोस्रो प्रमुखको रूपमा ज्ञवाली नियुक्त भएका थिए । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा डा. पोखरेल नियुक्त भएकोमा त्यसपछि आएको तत्कालीन एमाले नेतृत्वले पोखरेललाई हटाएर ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि फेरि तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारले ज्ञवालीलाई हटाएर पुनः पोखरेललाई नियुक्त गरेको थियो । गत संविधानसभामा निर्वाचन लड्नका लागि पोखरेलले राजीनामा दिएपछि फेरि युवराज भुसाललाई नियुक्त गरेको थियो । सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय खारेजीसँगै प्राधिकरण नेतृत्वविहीन बनेको थियो भने दुई दिनअघि मन्त्रिपरिषद्ले ज्ञवालीलाई पुनः नियुक्त गरेको थियो । ज्ञवालीले आफूलाई हटाएपछि त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोले मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै दुई दिनअघि नियुक्त गरे पनि सार्वजनिक भने गरेको थिएन ।
बिहीबार पदबहाली कार्यक्रममा बोल्दै नवनियुक्त प्रमुख ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको ठोस कार्ययोजना बनाएर पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । पदवहाली पछि आयोजित स्वागत कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले विगतका कामको समीक्षा गरी नयाँ कार्ययोजना साथ अघि बढ्ने बताए । विगतका अनुभव र पाठका आधारमा पुनर्निर्माणमा देखापरेका समस्यालाई समाधान गर्दै सबैसँग सहकार्य गरी अघि बढ्ने बताउँदै उनले स्थानीय तहमार्फत जनतालाई व्यापक परिचालन गरी आगामी वर्षलाई पुनर्निर्माणको अभूतपूर्व वर्ष बनाउने बताए । प्रमुख ज्ञवालीले समयभित्रै पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने बताए पनि यसअघि सरकारले तीन वर्षभित्र निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यको समयसीमा भने सकिसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार ८ लाख निजी घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म २ लाख ७० हजार घरधुरीको मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीलाई प्राधिकरणमा स्वागत गर्दै प्राधिकरणका सचिव अर्जुनबहादुर कार्कीले आगामी वर्षभित्र निजी आवास पुनर्निर्माणको कामलाई सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।